Toriteny Alahady faha 27 May 2018 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
 Tamin’ny Batemin’i Jesoa : Nisy feon’Andriamanitra Ray avy any an-danitra nanao hoe : « Ity no zanako malalako, ilay ankasitrahiko indrindra henoy Izy», teo koa i Jesoa ilay natao Batemy, ary ny Fanahy Masina dia naka endrika voromailala niseho teo ambony.
 Tamin’i Jesoa nitsangan-ko velona : raha araka ny Evanjely nosoratan’i Md Lioka dia nisy Anjely roa niseho tamin’ny Maria Madelena sy ireo niaraka taminy (iray kosa no voalaza any amin’ny Evanjely hafa) mba hanehoany an’Andriamanitra Ray sy ny Fanahy Masina ary izy ireo no nijoro ho vavolombelona voalohany fa nitsangan-ko velona tokoa i Jesoa, i Jesoa kosa dia nialoha lalana ireo Apôstôly tany Galilea.
 Rehefa naniraka ny mpianany i Jesoa dia nanao tamin’izy ireo hoe : « Mandehana ataovy mpianatro ny firenena rehetra, manaova Batemy azy amin’ny anaran’ny Ray, ny Zanaka sy ny Fanahy Masina»
Ny Andriamanitra tompointsika sy hivavahantsika dia Andriamanitra tokana olona telo :
Ao amin’ny Testamenta taloha moa dia Andriamanitra Ray no tena voatonona matetika. Ao anatin’izay dia Izy no tompon’ny fahendrena ary mampiaina ny finoana. Miaraka sy miombona eny foana anefa ny Trinite Masina fa samy manana ny asany. I Jesoa Kristy mpitondra sy mpizara fahasoavana sy famonjena ho antsika olombelona rehetra raha mandray Azy koa isika ; izany hoe maimaim-poana ny famonjen’Andriamanitra saingy kosa misy ezaka takiany amintsika.
Ao amin’ny Testamenta Vaovao indray dia i Jesoa Kristy no tena hita mibahan-toerana ao : teraka, niasa, nijaly, maty, nitsangan-ko velona, niakatra any an-danitra.
Tamin’ny Pantekôty kosa no teraka ny Fiangonana satria teo nirahina hijoro ho vavolombelona ireo Apôstôly fa nitsangan-ko velona i Jesoa Kristy ary niakatra any an-danitra. Nanomboka teo no tena niseho ny Fanahy Masina sy nampiseho ny asany. Ary matoa mijoro ny Fiangonana dia Ny Fanahy Masina no manentana azy, mamelona azy, mamporisika azy, mankahery azy amin’izay asa fitoriana napetrak’i Jesoa Kristy aminy.
Meteza ary isika ho entanin’ny Fanahy Masina sy hiasany fa Izy no hilaza ny marina amintsika sy hankahery antsika hijoro amin’ny finoantsika ka na mandalo fotoan-tsarotra na mandalo fifaliana ny fiainantsika dia hampiseho fa Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina no ivelomantsika sy iainantsika.